China 12 Head Linear Combination umlinganisi SW-LC12 mveliso Inyama kunye nabenzi | Isisindo esifanelekileyo
I-12 Head Linear Combination Weigher SW-LC12 yenyama
Isebenza ikakhulu kwi-semi-auto okanye kwi-auto enesisindo esitsha / inyama eqandisiweyo, intlanzi, inkukhu, imifuno kunye neentlobo ezahlukeneyo zeziqhamo, ezinjengengqayiweyo yenyama, iletisi, iapile, njl njl.
Ulwakhiwo: Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 304
Ubunzima beBelt: 10-1500 amagremu
Ubunzima bebonke: 10-6000 iigrem
Isantya: Iipakethi ezi-5-40 / imizuzu
Iingxowa ezi-5 ukuya kwezi-30 / i-min
Kala Ubungakanani beBelt
Ukujikeleza ubungakanani beBelt
Ubunzima be-G / N
I-220V / 50HZ okanye i-60HZ; Isigaba esinye
• Belt ubunzima kunye nokuhanjiswa kwiphakeji, kuphela iinkqubo ezimbini ukuze ufumane kancinci kwimveliso;
• Eyona ilunge kakhulu ekunamatheleni nasekufumaneni lula kwibhanti enobunzima nokuhanjiswa,
• Zonke iibhanti zinokuthathwa ngaphandle kwesixhobo, ukucocwa ngokulula emva komsebenzi wemihla ngemihla;
• Yonke imilinganiselo inokulungelelanisa uyilo ngokweempawu zemveliso;
• Ifanele ukudityaniswa kunye nokuhambisa okuhambisa & i-auto bagger kumlinganiso ozenzekelayo kunye nomgca wokupakisha;
Isantya esingenamkhawulo sohlengahlengiso kuzo zonke iibhanti ngokwahluka kwemveliso;
• I-ZERO ezenzekelayo kuyo yonke ibhanti enobunzima ngokuchanekileyo ngakumbi;
• Inketho yokukroba ibhanti yokutyela kwitreyi;
• Uyilo olukhethekileyo lokufudumeza kwibhokisi ye-elektroniki ukunqanda ukufuma okuphezulu.
I-Smart Weigh ibonelela ngombono owahlukileyo we-3D (umbono we-4 ngezantsi). Ungajonga umatshini ngaphambili, icala, phezulu, kwaye ujonge yonke imilinganiselo. Kucacile ukubazi ubungakanani boomatshini kwaye uthathe isigqibo sendlela yokusetha umlinganisi kwifektri yakho.
Edlulileyo: Iintloko ezi-4 zeNqanaba eliLukhuni I-SW-LW4
Okulandelayo: Umatshini wokupakisha isikhwama somgubo wokuma nkqo
yomgama indibaniselwano ubunzima